» निर्मलाको लागि न्याय माग्दै सर्लाहीको हरिवनमा पनि विरोध र्याली
निर्मलाको लागि न्याय माग्दै सर्लाहीको हरिवनमा पनि विरोध र्याली
३० भाद्र २०७५, शनिबार १९:४७
बलत्कार पछि हत्या भएको ५२ दिन बढी भईसकेको अझैं दोषी पत्ता नलागाएकाले देश व्यापीरुपमा निर्मलाको लागि स्वस्फूर्तरुपमा विरोध –र्याली निक्लिरहेको अवस्थामा सर्लाहीको हरिवनमा पनि निर्मलाको लागि न्याय माग्दै युवाहरुले विरोध र्याली निकालिएको हो ।
चुपलागेर नबसौं न्याय मर्न नदिउ, निर्मलालाई न्याय देऊ बलत्कारीलाई समाई देउ, सरकार देखाउ ईच्छा खोई त महिलाको सुरक्षा ? भन्दै हरिवनको कृण्ण चौकबाट निक्लेको विरोध र्याली पश्चिम लच्का नजिकबाट पूर्वको लच्कामा पुगी कृण्ण चौकमा आएका थिए । विरोधकर्ताहरुले ओली सरकारको राजिनामा समेत माग गरेका थिए । निर्मलाको आत्माले शान्ति पाओस् भनी दीप प्रज्वल पनि गरेका थिए । त्यसै गरि अन्तरपाटीका महिला नेतृहरुले निर्मलाको लागि न्याय तथा बलत्कार जन्य घटना घटाउन राज्यसँग माग गर्दै मन्तव्य समेत दिएका थिए ।
देशका कुना–कुनामा महिलाहरु बलत्कृत भएका छन् , उनीहरुको हत्या भएको छ । आवाज निकाल्नेहरु विचराका पात्र भएका छन् । हामी महिलाहरु कहिले सम्म विचराका पात्रहरु हुने ? नेपाल तामाङ घेदुङ प्रदेश नम्बर २ का उपाध्यक्ष सरिता बलले मन्तव्यको क्रममा आक्रोस पोखे भने, हामी महिलाहरु पाटीमा आवद्ध कार्यकर्ता मात्र होईन, हामी मानव हौं । यो मानवको सुरक्षा कसले गर्ने, राज्यले गर्ने कि नगर्ने भन्दै बलले राज्यसँग प्रश्न गरेका छन् ।